Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Erik Lamela Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "Coco". Anyị Erik Lamela Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na OFF-Pitch ihe ọmụma banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya dị egwu mana ole na ole na-ele Erik Lamela's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka amalite.
Akụkọ Erik Lamela nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Erik Lamela mụrụ na 4th nke March 1992 na Carapachay, Argentina. Amuru ya nne ya, Miriam Lamela na nna ya, José Lamela. Ọ tolitere na mpaghara Buenos Aires na nwanne ya nwoke nke okenye, Brian na nwanne nwoke nwoke bụ Alex.
Papa ya, Jose bụ onye yiri Gabriel Batistuta na onye gbara ya ume gbara nwa ya nwoke ume, Erik ka ọ bụrụ egwuregwu. Erik malitere ịgba chaa chaa mgbe ọ dị afọ 5.
Mgbe ọ sonyeere Osimiri Plate ka ọ dị afọ asaa, a kọrọ na Barcelona nyere Lamela na ezinụlọ ya £ 100,000 kwa afọ, yana ụlọ na ọrụ maka ndị mụrụ ya, ịkwaga n'obodo Barcelona. Nke a bụ ihe yiri nke ahụ na nke ahụrụ Lionel Messi gaa Spain dị ka nwata.
N'ụzọ na-awụ akpata oyi, ndị mụrụ ya jụrụ onyinye ahụ n'agbanyeghị na nwa ha nwoke nwere mmasị na Barcelona. Erik gosipụtara uwe elu Barcelona na-achọ ịmanye nne na nna ya. N'ezie, ndị mụrụ ya kpọrọ oku ikpeazụ site na ịjụ Barcelona na nlelị ma ọ bụ nlelị.
Nakwa na 2004, a Trans World Egwuregwu Ndi otu ihe nkiri gara Ajentina ka ha gbaa Lamela gbara afọ iri na abụọ bụ onye na-ebu isi akụkọ mgbe ọ gbasịrị ihe mgbaru ọsọ 12 maka akụkụ ntorobịa River Plate n'otu oge.
Mgbe Lamela nwetasịrị ọtụtụ ewu ewu dị ka onye ama ama ama ama na nwata, na-ekwupụta na ya chọrọ ịgbaso nzọụkwụ nke Diego Maradona ma merie World Cup maka Argentina. Mgbe ọ bụ nwata, ọ hụrụ egwuregwu PlayStation n'anya.
Lamela kwere nkwa iguzosi ike n'ihe nye River Plate, klọb ọ sonyere dị ka nwatakịrị dị afọ asaa.
Ezigbo nrụgide ọ bụ ezie na ọ sitere n'eziokwu ahụ bụ na n'ihi afọ ole na ole na-ezighi ezi, na-ekwughị nrụrụ aka a na-ebo ebubo, ụlọ ọrụ ya nọ na mbido ịdapụ maka oge mbụ na akụkọ ihe mere eme nke 110 na Lamela dị afọ 19 bụ nwoke ahu boro ibu-agha izoputa ha.
N'agbanyeghị mgbalị kacha mma Lamela mere, ụlọ ọrụ mechara daa, na-efunahụ egwuregwu dị egwu nke kpalitere ọgba aghara site na ngalaba nke ndị na-akwado ha.
Ka osi di, osisi apughi ime oke ohia. N'ịbụ onye meriri ọtụtụ trophi, Erik Lamela bụbu onye a maara dị ka obere chi nke football. Ihe kpatara ya ji egwuri egwu n'uzo di omimi.
Lamela kwara ụta mgbe ọ malitere ịmalite ọrụ ọkachamara na River Plate. Ọ na-egwu egwuregwu 36 ma merie naanị ihe mgbaru ọsọ 4. Nke a mere ka ọ kwa ụta karị banyere ịjụ FC Barcelona. Ọ manyere ụzọ ya na Europe site na isonyere Rome.
Lamela na RomeOtú ọ dị, oge ahụ kwụsịrị na obi mgbawa na mmeri nke ndị Rome na-agba Lazio na Coppa Italia n'ikpeazụ, yana ịmecha nke isii na Serie A, nke pụtara na Rome agaghị egwu egwuregwu European maka oge nke abụọ.
Nke a dugara na nkụda mmụọ Tottenham. Feegwọ maka Lamela mere ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ kachasị ọnụ na akụkọ ntolite ụlọ, £ 25.8 nde, gbakwunyere nde £ 4.2 na ego ịkwụ ụgwọ.
Erik Lamela na Sofia Herrero Storyhụnanya Akụkọ:
Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị ma lụrụ nwa okorobịa, n'oge na-adịghị anya ị ga-eyi nnukwu okenye karịa ya, ọ nwere ike ọ gaghị enwe mmasị ọzọ n'ebe ị nọ. Nke a abụghị ihe gbasara Lamela onye ya na enyi ya nwanyị tọrọ ya bụ Sofia Herrero kemgbe ọtụtụ afọ.
Erik hụrụ n'anya na ọ ga-anọ naanị ya. Ọ na-etinye oge niile ya na Sofia onye ya na ya dinara otutu afọ tupu ya emeso ya na 2010.
Ndị enyi abụọ ahụ kpebiri na ha agaghị enwe ụmụ ruo 25th November 2017 mgbe a mụrụ nwa ha bụ Tobias Lamela.
Ndụ Erik Lamela Ezinụlọ:
Dị ka o kwesịrị si kwuo, Erik sitere na ndị ezinụlọ Central America na-etolite tupu a kwụọ ụgwọ ịgba chaa chaa.
Nwa Angel Di Maria Akụkọ nke Gbasara Eziokwu
NME: Nna Erik Lamela mara ezigbo mma n'oge ọ bụ nwata. Lamela zipụrụ nna ya obere foto ya na nna ya, n'akụkụ akara ngosi ndị a: "Happybọchị obi ụtọ na ndị nna niile karịsịa m… ndị kasị mma 👏👏 M hụrụ n'anya ochie foto !!"
Na Instagram, ụfọdụ Fans nke Lamela tụrụ aro na foto nke nna ya na nwata dị ka dike Argentina Gabriel Batistuta.
Ka ọ dịgodị, na Twitter, hardcore Tottenham onye nkwado Steve Nash weghachitere Instagram njikọ ma jokingly na-eche ma nna Lamela, n'eziokwu, David Ginola. Nna ya emeela agadi dịka ekpughere na foto dị n'okpuru ebe a.
Nne: Erik Lamela na-aga na mgbasa ozi mgbasa ozi iji mee ka mama ya nwee obi ụtọ Motherbọchị Ndị Nne mgbe ọ gasịrị Tottenhamsi see Liverpool.
NNE: Erik Lamela nwere nwanne nwoke okenye nke aha ya bụ; Brian Lamela. Achọghị Brian maka ịgba bọọlụ site na nwata.
N'etiti ụmụnne ya, Alex Lamela nwa nwanne ya nwoke, nke dị n'okpuru ebe a na-abụkarị isi okwu nke mmasị.
Erik Lamela nwetara ujo n'otu abalị tupu ya amalite ụlọ Tottenham na akụkọ na nwanne ya nwoke nke tọrọ ya bụ ndị ndị agha na-ebu agha na obodo Buenos Aires.
Dị ka akụkọ na Itali si kwuo, Axel Lamela bụ 18 dị afọ iri na ụma weere ya maka mgbapụta.
Ejiri ya aka elekere ole na ole tupu ndị na-apụnara mmadụ ihe ahapụ ya na mbubreyo maka ego nke ihe dị ka 50000 pesos, nke pụtara ihe dị ka £ 5500 nke ya na ya nọ.
Ọ bụ ezie na ndị omempụ na-elekwasị anya n'ezinụlọ ndị na-agba ụkwụ ụkwụ abụghị ihe ọhụrụ, ndị uwe ojii kwenyere na na nke a, ọ dabara na ọ bụ naanị n'ihi ụgbọ ala na-enwu gbaa nke 18 dị afọ na-anya.
Nwa nwanne nwoke Erik Lamela, Brian Lamela kwuru, sị:… “Ha gwara anyị ka anyị nweta ego mgbapụta ahụ ma gbaa mbọ hụ na ndị uwe ojii etinyeghị aka na ya. Ha bịara n'ọnụ ụzọ ụlọ anyị ịnakọta ego ahụ. Ha ekpuchighị ihu ha ma kamera ndị na-eche nche n’ụlọ anyị dekọrọ ha. Nwanne m nwayoo. Anyị nile chere na ọ bụ ihe ndapụta - ha jidere ya naanị maka ụgbọala ahụ na enweghị ihe ọzọ. ”
Ọzọkwa, otu onye ahụ na-enweghị obi ụtọ bụ Alex Lamela gwakwara isi ya na ọdọ mmiri na obodo ha Argentina. Mmebi ya bụ nnukwu nke butere nkwarụ. Ruo ọnwa ole na ole, Alex enweghị ike imegharị ihe ọ bụla. O were otutu oge tupu ọ laghachite. Ọ maliteziri ịrụ ọrụ kwa ụbọchị iji laghachi n'ụzọ ndụ ya. N'oge ihe mberede ahụ, Lamela nọ na nsogbu hip.
Erik Lamela Ndụ Nke Onwe:
Erik Lamela aka 'Coco' nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike nke Erik Lamala: Erik nwere ọmịiko, nkà, nke na-emetụbeghị na nke dị nro.
Adịghị ike Erik Lamela: Erik nwere ike ịtụ ụjọ ma nwee ọchịchọ ịhapụ eziokwu.
Ihe Erik Lamela na-enwe mmasị: Erik Lamela hụrụ ịnọ naanị ya. Ọ na-enwekwa mmasị ihi ụra, egwu, mmekọrịta ịhụnanya, mgbasa ozi nke ọma, igwu mmiri na isiokwu ime mmụọ.
Ihe Erik Lamela achọghị: Ndị mmadụ na-azọrọ na Ha maara ya niile, oge gara aga na-abịaghachi na ya (dịka: ịjụ FC Barcelona n'oge ọ bụ nwata) na n'ikpeazụ, obi ọjọọ ọ bụla.
Erik Lamela dị njikere inyere ndị ọzọ aka, n'enweghị olileanya inwe ihe ọ bụla. A na-eji ndụ ọmịiko gosipụta ndụ ya na ikike mmetụta uche ya.
Erik Lamela weere ihe mgbaru ọsọ dị ịtụnanya na-egosi ihe kpatara ya Tottenham wepụrụ £ 30million maka ọrụ ya. Ọ bụghị ihe ọzọ karịa ya 20-ya 'rabona'Ihe mgbaru ọsọ maka Spurs nke bịara na Njikọ Njikọ ya na Europe megide Asteras Tripolis.
Na-awụ akpata oyi n'ahụ, naanị onye onye ọrụ ahụ na-emetụbeghị bụ njikwa Mauricio Pochettino, bụ onye gosipụtara mmetụta ọ bụla ọbụna dị ka ndị na-enye ọzụzụ na-adaba n'ụkwụ ha.
N'okwu Erik Lamela na Telegraph, ọ sịrị…“Naanị m na-ahọrọ ikwu banyere ọganihu otu na ọnụ na nke ahụ dị mkpa. Enweghị m mmasị ikwu banyere ihe dị ka 'rabona'. Mgbe m bụ nwatakịrị, amụrụ m otú e si eme ya ma ọ fọdụziri. Ọ bụghị naanị ihe m mere. Ọ bụ ihe e bu pụta ụwa. ”
Erik nwere ọnwa 13 dị nro n'akụkụ akụkụ. Nke a bụ oge a ga-ajụ ọdịnihu ya na ọrụ ya ajụjụ. Akụkọ akụkọ Spurs Ricky Villa - onye Argentine nke dị nso na njikwa ụlọ ọrụ ahụ bụ Mauricio Pochettino - kwuru na enwere nchegbu na ọ nweghị ike igwu egwu ọzọ.
Mgbe a jụrụ ya ma ọ tụrụ ụjọ maka ọdịnihu ya, Lamela kwuru, sị:…"N'ezie. N'oge oge dị njọ, ị na-echekarị ihe kacha njọ. Mana ezinụlọ m na-anọnyere m mgbe niile na ndị na-akwado ya chọrọ m na pitch. Ha na-ewetara m ume ịrụ ọrụ kwa ụbọchị ma ghara ịda mbà. ”
Nke a bụ ihe o kwuru mgbe ọ lọtara…
"Enwere m obi ụtọ na m ga-alaghachi n'olulu ahụ kama enwere m mwute n'ihi ihe kpatara ya. N'ezie, enwere m ike ịka mma. Ọnwa 13 gara aga bụ ndị nzuzu, ma eleghị anya ọ bụ oge kasị njọ ná ndụ m. Achọrọ m igwu egwu ma m merụrụ m ogologo oge.
“Onye njikwa ahụ na ndị ọrụ ahụ niile dị ịtụnanya. Ha nọnyeere m mgbe niile. Ndị mmadụ chọrọ ka m laghachi ma m na-elekwasị anya na ya. Ezinụlọ m na-anọnyere m mgbe niile, enyi m nwanyị na-agba m ume ịlaghachi. N'ezie, ọ siri ike ịnọ ogologo oge mana ọ bụ bọọlụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Erik Lamela Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.